Battery Thermal Management System yeMagetsi Bhazi, uye Coach fekitori uye vagadziri | SONGZ
JLE Series, BTMS, Roof yakaiswa
Iyo BTMS (Battery Thermal Management System) yebhatiri rese ine iyo inotonhorera module, iyo yekudziya module, iyo pombi, yekuwedzera mvura tangi, yekubatanidza pombi uye yemagetsi kutonga. Iyo inotonhorera mvura inotonhorera (kana kupisa) neiyo inotonhorera module (kana iyo yekudziya module), uye iyo yekugadzirisa mhinduro inotenderedzwa mune inotonhora system yebhatiri nepombi. Iyo inotonhorera module ine yemagetsi mupumburu compressor, yakafanana kuyerera condenser, ndiro yekupisa exchanger, H yekuwedzera vharuvhu uye inodzora fan. Iyo inotonhorera module uye yekudziya module zvakabatana zvakateedzana zvakateedzana kune system pombi, uye yega yega chikamu chekutenderera sisitimu chakabatana kuburikidza nemuviri unopisa mvura pombi uye wekutendeuka mubatanidzwa.
Technical Rondedzero yeMagetsi Bhazi BTMS JLE Series:
Kutonhora Kugona Standard 6 kW 8 kW
Kutenderera Mvura Inoyerera Vhoriyamu 32 L / min (Musoro ＞10m) 32 L / min (Musoro ＞10m)
Kuyerera Kwemhepo Vhoriyamu (Zero Pressure) Condenser 2000 m3 / h 4000 m3 / h
Chikwata Divi 1370x1030x280 (mm) 1370x1030x280 (mm)
Kurema 65 makirogiramu 67 makirogiramu
Simba rekuisa 2kW 3.5kW
1. Performance: iyo BTMS inogona kuyera uye kuongorora tembiricha tembiricha munguva chaiyo kuburikidza neBMS system. Iko kutonhora uye kupisa kupisa kumhanya kuri kukurumidza.
2. Simba rekuchengetedza: iyo firiji module yemagetsi yekudzvanya system inotora yepamusoro frequency kutendeuka kudzora tekinoroji uye yakanyanya kushanda DC frequency kutendeuka mupumburu compressor, iri ingangoita 20% simba rekuchengetedza kupfuura yakajairwa compressor.
3.Kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza: BTMS yakazvimirira, ichishandisa kuyerera kuyerera uye kupisa kupisa kweplate, inova nechokwadi chekuti firiji inobhadharisa zvishoma.
4. Kuchengetedzwa kwepamusoro: chigadzirwa chakagadzira maviri maseru ekudzivirira, yakakwira uye yakaderera kumanikidza uye yekumanikidza yekudzivirira chishandiso, izvo zvakavimbisa zvakanyanya kuchengetedzwa kwekushandisa kwechigadzirwa.
5. Kuisirwa nyore: iyo BTMS haidi firiji pane saiti, uye muviri unosunganidzwa nemapombi emvura anopisa kuitira nyore kuiswa.
6. Kuvimbika kwakakwirira: iyo system yekutonga inotora imwechete-chip microcomputer yekudzora tekinoroji, yakakura uye yakavimbika. Hupenyu hurefu, ruzha rwakaderera, hapana gadziriso, hwakareba hupenyu kupfuura hwese bhurashi fan, compressor dhizaini hupenyu hwemakore gumi neshanu, yakaderera kutadza chiyero.
7. PTC kupisa basa, pane yakaderera tembiricha, PTC yemagetsi kudziyisa kudziyisa, kuona kuti zvigadzirwa munzvimbo inotonhora zvinogona zvakare kushandisa.
Pashure: Magetsi Bhazi Mhepo Inodzora yeMagetsi Double Decker Bhazi
Zvadaro: Air Conditioner yeMini uye Midi Guta Bhazi kana Yevashanyi Bhazi